A wakporo Telefónica, Vodafone na BBVA | Gam akporosis
A wakporo Telefónica, Vodafone na BBVA
Miguel Gaton | | Noticias, Ndị ọrụ ekwentị
Onweghi ihe omuma putara ma odi ka odi netwọkụ nke Telefónica, Vodafone, BBVA na Capgemini na-enwe ọdịdọ maka nkeji ole na ole ma a na-eme mkpọtụ na ụlọ ọrụ nke ụlọ ọrụ ndị a, na-agwa ndị ọrụ ha na usoro adreesị ọha na eze ka ịkwụpụ kọmputa ha na netwọkụ n'ime.
Dabere na isi mmalite, ọ bụ maka mwakpo dị njọ nke na-emebi iguzosi ike n'ezi ihe nke netwọk nke ụlọ ọrụ ndị a yana na o doro anya na ọ ga-ekwe omume na ọ na-emetụtakwa ụlọ ọrụ ndị ọzọ dịka KPMG na HP ọ bụ ezie na ekwenyebeghị ikpe ndị a.
Mwakpo ahụ si ụdị ransomware nke mejuputara virus komputa na encrypts ozi na kọmputa emetụta site na igbochi ndị nwe ha ịnweta ọdịnaya ha ka ha mechara rịọ ka a kwụọ ụgwọ maka ihe mgbapụta n'ọnọdụ iwepụ ihe ezoro ezo. Channelzọ a na-eme iji kwụọ ụdị mgbapụta a sitere na ego bitcoins ego, nke na - eme ka ịchọta ego na - esiri m ike. Dị ka data na-erute anyị, o yiri ka ọ dịkarịa ala 100 Kọmputa Telefónica enwere ike ịmetụta nwere nje ahụ.
Ọ bụ nsogbu na-emetụta ọ bụghị naanị isi ụlọ ọrụ nke ụlọ ọrụ ndị a kamakwa ndị enyemaka ha na ụlọ ọrụ sekọndrị, yabụ anyị nwere ike ihu nsogbu nke akụkụ dị mkpa. N'oge a nnukwu mgbasa ozi ekwupụtabeghị ozi ọma, ọ bụ ezie na ọ malitelarị ịpụta ozi dị iche iche na Twitter. O nweghịkwa ebe ahụ enweghị nkwukọrịta gọọmentị nke mbuso agha ahụ ọ nweghị ụlọ ọrụ emetụta ma ọ bụ ndị isi ha.
1 Ozi sitere na ndị ọrụ nchekwa Telefónica
2 Companieslọ ọrụ na ụlọ ọrụ ndị ọzọ emetụta?
3 Telefónica na-emesi obi ike na ọ chịlarị ọnọdụ ahụ
4 CCN-CERT kwadoro ọgụ ahụ
Ozi sitere na ndị ọrụ nchekwa Telefónica
Ndị ọrụ nchekwa ekwentị na-agbasa ozi a ka ndị ọrụ niile gbanyụọ kọmputa ahụ ma gbanyekwala ya n’echiche ọ bụla.
OGBU: Gbanyụọ kọmpụta gị ugbu a
Ndị otu Security achọpụtala malware na-abanye na netwọk Telefónica nke na-emetụta data na faịlụ gị. Biko gwa ndị ọrụ ibe gị niile banyere ọnọdụ a.
Gbanyụọ kọmputa ahụ ugbu a ma agbanyekwala ya ruo mgbe ị matara ihe ọzọ (*).
Anyị ga-ezitere gị ozi email ị nwere ike ịgụ site na mkpanaka gị mgbe ọnọdụ ahụ dị mma. Na mgbakwunye, anyị ga-agwa gị n'ọnụ ụzọ ụlọ ndị ahụ gbasara nweta netwọkụ.
Ọ bụrụ na ị nwere ajụjụ ọ bụla, kpọtụrụ Ngalaba Enyemaka (29000)
(*) Kwupu mkpanaka site na netwoki WiFi mana igaghi agbanye ya
A machibidokwara ndị ọrụ iwu wepu ụdị kọmpụta ọ bụla na akụrụngwa ya.
Ihe mbụ gosiri na mwakpo sitere na china nakwa na enweelarịrị ihe karịrị komputa 100 Telefónica ebe ozi nke ịkwụ ụgwọ mgbapụta pụtara. Companylọ ọrụ ahụ ekwupụtala na mwakpo ahụ anaghị emetụta ndị ahịa ya, nke ka na-arụ ọrụ.
Companieslọ ọrụ na ụlọ ọrụ ndị ọzọ emetụta?
Dịka ozi rutere anyị si nwee ọtụtụ ụlọ ọrụ dịka Everis ndị na-arịọ ndị ọrụ ha ka ha gbanyụọ kọmputa ndị ahụAnyị amaghị ma ọ bụrụ na ihu ihe akaebe ọ bụla nke mbuso agha ma ọ bụ na ọ bụ naanị dịka nchekwa, ndị ọzọ dịka Gas Natural Fenosa kwukwara nsogbu na netwọkụ dị n'ime ha. Nkeji ole na ole gara aga anyị nwetara asịrị mbụ nke a enwere ike ibute ọrịa n'ime ahụ ọha nke na-emetụta data echedoro.
Telefónica na-emesi obi ike na ọ chịlarị ọnọdụ ahụ
Telefónica isi mmalite Ha na-ekwu na ha na-achịkwa ịwakpo cyber nakwa na mmetụta ya erughị oke dị ka azọrọ na mbụ. O doro anya na nje ahụ abanyela na kọmputa n'okpuru Windows na-efu efu ma emetụta Windows 10 kọmputa na-eji uru nke nchekwa ọjọọ.
CCN-CERT kwadoro ọgụ ahụ
Site na CCN-CERT "Mwakpo ransomware na-emetụta ọtụtụ ndị otu Spanish" https://t.co/G0HRi77nZa pic.twitter.com/GE8hJGuvnQ
- Chema Alonso (@chemaalonso) Nwere ike 12, 2017
Site na otu tweet dere site n'aka Chema Alonso anyị chọpụtara na CCN-CERT ekwuolarị ihe ahụ wakpo ọtụtụ ndị otu nzukọ Spain.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Noticias » A wakporo Telefónica, Vodafone na BBVA
DOOGEE Y6 Max 3D, nyocha na uche